» ब्रेकिङ – आइसोलेसनमा यादवको मृत्युको कारण ‘कोरोना होइन, अटो इम्युन डिजिज’, के हो अटो इम्युन डिजिज ?
ब्रेकिङ – आइसोलेसनमा यादवको मृत्युको कारण ‘कोरोना होइन, अटो इम्युन डिजिज’, के हो अटो इम्युन डिजिज ?
११ चैत्र २०७६, मंगलवार १५:५६
काठमाण्डौ – चितवनको भरतपुरमा रहेको कोरोना विषेश अस्पतालमा उपचार गराइरहेका युवकको ज्यान जानुको कारण कोरोना नभएर अटो इम्युन डिजिज भएको खुलेको छ । टेकु प्रयोगशाला श्रोतले उज्यालोलाई दिएको जानकारी अनुसार वीरगञ्जका ३० वर्षीय सन्तोष यादवको ज्यान जानुको कारण कोरोना नभएर अटो इम्युन डिजिज हो ।
के हो अटो इम्युन डिजिज ?
नाम फरक भएपनि विश्वमा ८० भन्दा बढी प्रकारका अटोइम्यून डिजिज छन् । अटो इम्यून डिजिज भएमा यसले कयौ किसिमका रोग निम्त्याउने गर्छ । र, शरीरका विभिन्न अंगलाई प्रभावित पार्ने गर्छ । यो रोग लागेमा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भई शरीरको प्रतिरोध प्रणालीले रोगको संक्रमण विरुद्ध लडनुको सट्टा शरीर विरुद्ध नै हमला गर्न थाल्छ । तर अटो इम्युन डिजिज भएमा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली नै कमजोर हुने गर्दछ ।
यो समस्या विशेषगरी त्यतिबेला हुन्छ, जब शरीरमा मौजुद विषाक्त पदार्थ, संक्रमण तथा खानामा पाइने विशाक्तलाई हटाउनका लागि प्रतिरोधी क्षमताले संघर्ष गर्न थाल्छ । यो रोग लागेमा शररिको टिस्यूले नै शरीरलाई कमजोर तथा रोगी बनाउने गर्दछ ।
अटो इम्युन डिजिजले के के लाई प्रभावित पार्छ ?
अटो इम्यून डिजिज भएमा लुपस, सोरायोसिस, ह्युमेटिक आर्थराइटिस (बाथ रोग), मल्टीपल सेलेरोसिस, थाइराइडको समस्या, टाइप १ डायविटिज लगायतको समस्या निम्तन सक्दछ ।
अमेरिकाको कुल जनसंख्याको करिब सात प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको अटो इम्यून डिजिजबाट ग्रसित छ । अटो इम्यून डिजिजको समस्या युवावस्थामा सुरु हुन्छ । यो समस्या पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै हुने गर्छ ।